Daboolka Kursiga Tayada Sare
Alaabta Kaydka Baabuurta ee Sanduuqa
Balanbaalista Madow ee Xiran ee Daboolka Kursiga Baabuurka
Gawaadhida Ku-xidhan Pet Mat
Hadafkayagu waa inaanu ku bixino tiro badan oo ah qaybo baabuur oo aad u fiican oo qiimo jaban ah, kana sarreeya filashadaada. Waxaan si joogto ah ugu dadaalnaa inaan siino macaamiisha isgaarsiinta ugu hufan uguna saaxiibtinimo badan, macaamilo fudud iyo gaarsiin degdeg ah.
Hadafkayagu waa inaanu ku bixino tiro badan oo ah qaybo baabuur oo aad u fiican oo qiimo jaban ah, kana sarreeya filashadaada. Waxaan si joogto ah ugu dadaalnaa inaan siino macaamiisha isgaarsiinta ugu hufan uguna saaxiibtinimo badan, macaamilo fudud iyo gaarsiin degdeg ah. Waxaan bixinaa qaybo baabuur oo kala duwan inta badan noocyada iyo moodooyinka suuqa, sida daboolka kursiga tayada sare leh iyo daboolka baabuurta, suufka cagaha ee ilaaliya, daboolka isteerinka maqaarka, iyo wixii la mid ah. Hawlaha iyo faahfaahinta waxaa ka mid ah 2 baaldiyo hore, 1 dabool oo kursiga keydka ah iyo 5 dabool oo barkin ah, iyo dusha sare ee daboolku wuxuu leeyahay furitaanka Velcro, kaas oo kaa caawin kara inaad si fudud u soo celiso barkimaha. Maro-miiseedkayagu dhererkiisu waa 52 inches. Maaddadu waxay ka samaysan tahay dhar tayo sare leh oo raagaya, raaxo leh oo neefsanaysa-fudud in la nadiifiyo, mashiinka la dhaqi karo oo hawo-qallalan. Codsiga guud ee loogu talagalay in lagu qaado kuraas dhaqameed iyo kuleyl ayaa ku habboon ku dhawaad ​​dhammaan kuraasta (baabuurta, gawaarida, gawaarida iyo SUV-yada). Nidaamkani waa mid aan ku haboonayn barkinta shilka ee dhinaca hore iyo shaqada kala soocida danbe. Habka fuulista iyo naqshadeena geesinimada leh. Xariijimaha qaro weyn ayaa hubaal ah inay soo jiidan doonaan dareenka. Waxaa jira midabyo badan oo ku habboon gudaha kasta. Dharkayaga tayada sare leh wuxuu leeyahay barkin xumbo 3mm ah gadaashiisa, kaas oo ka saari kara kulaylka oo ku ilaalin kara qabow iyo raaxo xitaa heerkulka ugu kulul.
Xidhmada waxaa ka mid ah: 2 Dabool oo baaldi hore ah, 1 Kursiga dambe oo kala qaybsan, 5 daboolka madaxa ah.
Qalab: Maro fidsan / Polyester.polyester oo leh nashqad xariijimo leh caarada Nadiifinta: Mashiinka la dhaqi karo, hawo qallalan.
Hore:barkinta shilka ee dhinac soconaysa - si rasmi ah loo tijaabiyay - farsamada tolaynta gaarka ah waxay u oggolaanaysaa barkinta shilka inay ku barato marka ay saamayso. Dhabarka dambe ee kursiga hore waxa lagu sameeyaa dhar fidsan oo waara oo leh jeebka furitaanka ee kaydinta. Furitaanka velcro ee qarsoon iyo xargaha la hagaajin karo waxay ka dhigaan rakibaadda, saarista, iyo dib u dhejinta neecaw
Kahortagga wasakhda-Dabooladani waxay ku fiican yihiin gaarigaaga cusub, xitaa gaarigaaga cusub. Daboolka kursigeena wuxuu ka hortagi karaa daadinta iyo wasakhowga gudaha baabuurka. Alaabada la neefsan karo-Waxaan u isticmaalnaa walxo si gaar ah loo doortay si aan u helno * raaxo weyn inta lagu jiro safarka maalinlaha ah. Lakabka sare ee polyester-ka oo tayadiisu sareyso waxay ku siinaysaa hawo la xoojiyey si ay kuugu qaboojiso oo aad raaxo u yeelato markaad baabuur wadid. Naqshadaynta moodada ah-ka dhig gaadhigaaga mid cusub oo soo noqo. Kursigan daboolan ee buuxa wuxuu leeyahay nashqad laba midab leh oo qurux badan oo leh wax lagu qurxiyo, taas oo sahlaysa in lagu daro midabka gudahaaga. Si fudud loo rakibi karo-maalgelinta baabuurkaada cusub sidoo kale waxay noqon kartaa mid dhakhso badan. Ku rakib daboolka kursiga hore iyo daboolka fadhiga madaxa sida waafaqsan habka rakibaadda 3-tallaabo ee fudud. Codsiga caalamiga ah-Naqshadaynta daboolka fadhiga waxay ku habboon tahay baabuurta intooda badan, oo ay ku jiraan baabuurta, kuwa xamuulka qaada, basaska iyo SUV-yada. Fadlan ka eeg sawirada alaabtayada tusaale ahaan qalabyada. Waxay qaadan kartaa xoogaa shaqo dheeraad ah si loo abuuro taam "fiican".
Hore: Warshadaynta Tayada Sare ee Qorraxda
Xiga: Alaabta Kaydka Baabuurta ee Sanduuqa
Daboolka Kursiga Baabuurka
Daboolka Kursiga dambe
Daboolka Kursiga Jeep
Daboolka Kursiga Baabuurka ee Hargaha
Daboolka Kursiga Neoprene
Dabool Kursiga aan biyuhu lahayn
Warshadaynta Tayada Sare ee Qorraxda
Baabuurka Qorraxda Shayga Ka-hortagga Kaneecada...
Qorraxda Qorraxda ee Baabuurka Tayada Sare
Daboolka Kursiga Baabuurka ee Shan-Qalab ah
© Xuquuqda daabacaadda - 2020-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.
2F.138 Waddada Qiaonan, Tiantai.Zhejiang, Shiinaha
7 maalmood usbuucii laga bilaabo 10:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo
Weydiin Hadda Weydiin Hadda